China Magnetik mkpakọ ikpere nkwado aka uwe nkwado ngwaahịa na ndị na-ebu ya | AoFeiTe
Magnetik mkpakọ ikpere nkwado aka uwe nkwado
Product aha:Magnetik Mkpakọ ikpere Nkwado aka emem nkwado
Nha:SML XL, Aka uwe
Na Ikpere emem nkwado iji teknụzụ nwere ọnụọgụ atọ nke ejiri mmetụta mee, Obi dị gị mma, Na-abụghị mmịfe na nkasi obi na-ebikọ, Ikpere ikperena Ezi ikuku, ákwà dị mma karị, ezigbo resili. Uwe aka ikpere okpukpu abụọ na-enweghị mmịfe mmanya na-egbochi ikpere na mmegharị ahụ,Ikpere ikpere dịkwuo nchekwa nke mmegharị
Ikpere, emem nkwado, Ikpere aka uwe Aha ngwaahịa: Magnetik mkpakọ ikpere nkwado aka uwe nkwado Ihe: Spandex, Polyester, naịlọn Agba: Yellow / nwa Green / nwa Oroma / Nwa Ogologo: 32cm Ibu: SML XL Ojiji: igbu, egwuregwu, medica, ọkụ, nchedo, ịkpụkpụ Akara: Akara nnabata Oge nlele: 3-10 ụbọchị Ebute oge: 15-30 ụbọchị Nkwakọ ngwaahịa nkọwa: akpa Opp, 100Pcs / katọn
Anyị bụ ndị ọkachamara na nlekọta ahụike na orthopedic ngwaahịa dị ka Ikpere nkwado nkwado ikpere, N'úkwù Back nkwado Nkwado, Posture Corrector, Mkpụrụ Nkwado Nkwado, Ikiaka nkwado Nkwado, Mgbehu emem nkwado Nkwado, Nkwado Nkwado Nkwado, Olu Nkwado Nkwadowere gabazie. Ọzọkwa otu ọrụ njirimara anyị bụ ịhazi usoro. Anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa na njirimara imewe gị na igbe agba. Anyị na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ ogologo oge!
Na-achọ ezigbo mkpakọ ikpere aka Manufacturer & soplaya? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. Ihe mkpuchi ikpere Magnetic niile bụ nke ekwe nkwa. Anyị bụ ndị China si Factory nke ikpere Support uwe. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Kemeghi mkpakọ adabere ikpere Support Brac ...
ala mgbochi ileghara mkpakọ ikpere nkwado su ...
Powerlifting ikpere eyiri Construction Walker kne ...
Design Knee Nkwado Aka maka Enyemaka Ogbu na nkwonkwo
Mkpakọ Anti-Skid ikpere Aka